काठमाडौं । नेपालमा बीमा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सरकारको स्वामित्वमा २०२४ पुस १ गते राष्ट्रिय बीमा संस्थान प्रालिको स्थापना भएको थियो । रू. १ करोड अधिकृत पूँजीमा स्थापित कम्पनीले २०२४ फागुन ११ गतेखि व्यावसायिक कारोबार शुरू गर्‍यो । पछि २०२५ सालमा ‘राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन २०२५’ आएपछि यो संस्थानमा परिवर्तन भयो ।
शुरूमा निर्जीवन बीमा मात्र गर्ने संस्थानले २०२९ देखि जीवन बीमा व्यवसायको पनि थालनी गर्‍यो । तर, २०७१ सालदेखि संस्थानले जीवन बीमाको व्यवसाय मात्र गर्दै आएको छ ।
राष्ट्रिय बीमा संस्थान आउनुअघि नेपालमा भारतीय बीमा कम्पनीले बीमा सेवा प्रदान गर्दै आएका थिए । संस्थान आएपछि भारतीय कम्पनी फर्किए । त्यसपछि संस्थानलाई नेपाली बीमा बजारमा एक्लै ‘राज’ गर्ने अवसर प्राप्त भयो । तर, संस्थानले त्यसअनुरूप आफ्नो व्यावसायिक गतिविधि अगाडि बढाउन सकेन ।
मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता, दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, ट्रेड युनियनमा हुने राजनीति लगायतले पनि संस्थानलाई नकारात्मक असर पार्‍यो । साथै, पर्याप्त तथा दक्ष जनशक्ति नहुँदा पनि संस्थान आन्तरिक रूपमा कमजोर हुँदै गयो ।
लेखापरीक्षण, बीमांकीय मूल्यांकन तथा वार्षिक साधारणसभा जस्ता गतिविधिमा समेत संस्थान पछि पर्दै गयो । संस्थानले १०औं वर्षसम्म पनि लेखापरीक्षण र वार्षिक साधारणसभा गर्न सकेन । संस्थानले धेरै वर्षहरू ‘पेन्डिङ’मा रहेका काम गरेरै बितायो ।
अझै पनि संस्थानको आव २०६४/६५ देखिको साधारणसभा भएको छैन । यद्यपि, पछिल्लो समय संस्थानको अवस्था भने सुधारोन्मुख रहेको छ । बजारमा आफूभन्दा पछि आएका कम्पनीहरूले व्यावसायिक गतिविधि बढाएपछि संस्थान पनि आफूलाई बलियो प्रतिस्पर्धीको रूपमा अगाडि बढ्न लागिपरेको छ ।
संस्थानको पछिल्लो ५ आवको वित्तीय विवरणले अधिकांश सूचक राम्रो हुँदै गएको देखाउँछ । बीमाशुल्क संकलन, नाफा, जीवन बीमा कोष बढ्दो अवस्थामा छन् । बीमाशुल्क, बीमा कोषको आधारमा संस्थानले बीमा बजारको करीब ९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।
संस्थानले हालसम्म रू. ५२ अर्बभन्दा बढी कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । त्यसमा चालू आवको पहिलो ६ महीनाको मात्रै ५ अर्ब ६८ करोड रहेको छ । बीमाशुल्क संकलन गर्ने मामलामा १९ कम्पनीमध्ये संस्थान तेस्रो स्थानमा छ ।
यस्तै, लामो समयदेखि हुन नसकेको लेखापरीक्षण, बीमांकीय मूल्यांकन र साधारणसभा पनि छिट्टै गर्ने संस्थानको योजना छ । संस्थानको आव २०६४/६५ यताको लेखापरीक्षण, बीमांकीय मूल्यांकन र साधारणसभा हुन बाँकी छ ।
संस्थानको आव २०७०/७१ देखि २०७३/७४ सम्मको बीमांकीय मूल्यांकनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । त्यसपछिका आवहरूको पनि बीमांकीय मूल्यांकन तथा लेखापरीक्षणको काम जारी रहेको संस्थानले बताएको छ ।
संस्थानले पछिल्लो समय पुराना समस्या समाधान गर्दै प्रविधिको विकासमा पनि उत्तिकै जोड दिइरहेको छ । समग्रमा संस्थान अहिले प्रविधिमैत्री व्यवसाय गर्नेगरी योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढेको प्रशासक कविप्रसाद पाठक बताउँछन् ।
पहिले संस्थानको प्रधान कार्यालयबाट मात्र बीमा पोलिसी जारी गर्न मिल्थ्यो । काठमाडौं बाहिरका बीमितलाई बीमालेख पाउनै ३ महीनासम्म लाग्ने गरेको थियो । तर, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । अहिले प्रत्येक शाखाबाटै बीमा पोलिसी जारी गर्न सकिन्छ । बीमा गरेको प्रमाण अर्थात् बीमा पोलिसी ग्राहकले आधा घण्टाभित्रै पाउन सक्छन् ।
यस्तै, संस्थानले ‘एसएमएस अलर्ट’ सेवा पनि सञ्चालन गरेको छ । पहिला ग्राहकले बीमा अभिकर्तामार्फत बीमाशुल्क बुझाए पनि त्यो रकम संस्थानमा पुग्यो/पुगेन थाहा पाउन सहज थिएन । तर, अहिले ग्राहकको पैसा भुक्तानी भएको जानकारी एसएसएस अलर्ट मार्फत हुने गर्छ । साथै, यसबाट बीमितले अन्य जानकारी पाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संस्थानले आफ्नै मोबाइल एपको पनि शुरुआत गरिसकेको छ । त्यसमार्फत पनि ग्राहकले आफ्नो बीमा पोलिसी र संस्थानको सेवा सुविधाबारे थाहा पाउन सक्छन् ।
संस्थानले आफ्नो आन्तरिक सफ्टवेयर समेत विकसित गर्दै आएको छ । यसअघि लामो समयसम्म डेस्कबेस्डमै काम गरेको थियो । त्यसबेलाका तथ्यांक राख्ने पनि कुनै प्रविधि थिएन । संस्थानका सवै तथ्यांक कागजी रूपमा मात्र भण्डारण गरिएको थियो । तर, अहिले आन्तरिक प्रयोजनका लागि नयाँ सफ्टवेयर ल्याइसकेको छ । त्यसमा पुराना तथ्यांक समावेश गर्ने काम पनि भइरहेको छ ।
अब संस्थानलाई प्रविधियुक्त बनाउने गरी अगाडि बढेको प्रशासक पाठक बताउँछन् । ‘संस्थानले लामो समयसम्म डेस्कबेस्डमा काम गरेको थियो । अहिले त्यस तथ्यांकलाई नयाँ सफ्टवेयरमा सार्ने काम गरेका छौं,’ उनले भने ।
नेपालमा सञ्चालित जीवन बीमा सेवा प्रदायकहरूको जीवन बीमा कोष २०७७ पुस मसान्तसम्ममा रू. ३ खर्ब २३ अर्ब १८ करोडको छ । उक्त अवधिमा राष्ट्रिय बीमा संस्थानले ३१ अर्ब ७२ करोडको जीवन बीमा कोष कायम गरेको छ, जुन कुल जीवन बीमा कोषको ९ दशमलव ८२ प्रतिशत हो ।
यसरी गर्न सकिन्छ गर्मी मौसममा सयपत्री फूलको खेती[२०७७ फागुन, २१]